ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘောလုံးတွေနဲ့လမ်းညွှန် - သတင်း
ဝှေးစေ့များသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအရာဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ယောက်ျားလေးများသူတို့နှင့်အတူကစားသောအခါသူတို့ကိုချစ်ပေမယ့်လည်းမကောင်းတဲ့ပြောင်းရွှေ့မျက်ရည်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုချစ်ကြောင်းပုံပြင်များကြားဖူးတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘောလုံးတွေနဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းသိဖို့လည်းခက်တယ်။ သူတို့ကိုခွက်သင့်လား။ သူတို့နဲ့ကစားလား။ သူတို့ကိုလေဖြတ် သူတို့ကိုနို့စို့လား အဖြေမှာအထက်ပါအရာအားလုံးနှင့်ဟုတ်သည်။
ကောင်လေးရဲ့ဘောလုံးတွေနဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းသိဖို့ဆိုတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုအဆင့်သုံးဆင့်တက်စေတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ကန်းကိုလျက်သည့်အခါ၊ သူမလက်ချောင်းများသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူနှင့်တူသည်။ ဒါဟာသူမကိုတက် fucks, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မင်း fuck ဆိုတဲ့လား သူ့ကို တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလမ်းအတွက်တက်? သို့ဆိုလျှင်သင်၏အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားနည်းအချက်အလက်များအားအလွတ်ကျက်ရန်လိုအပ်သည်။
စည်းမျဉ်းနံပါတ်တစ် - နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှိကြလော့
ယောက်ျားများသည်မည်မျှအထိခိုက်မခံနိုင်သောဘောလုံးများဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိလာပြီးဂရုတစိုက်သွားတတ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မည်သည့်ဖိအားသည်မှန်ကန်ကြောင်းသိရှိရန်ခက်ခဲသည်။ သင်လုပ်နေတာကိုသူတို့ကခံစားစေချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ညီတူညီမျှနည်းနည်းလေးကြမ်းတမ်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကတကယ်နာကျင်နိုင်တယ်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ပြီးဘာလုပ်နေသလဲလို့မေးတာကပိုကောင်းတယ်။ အကယ်၍ သူတို့သည်သင့်ကို ပို၍ ခက်ခဲစေလိုလျှင်၎င်းတို့အားသင့်အားပြောပြစေပါ။ သူတို့မှာသင့်အားပြောပြရန်အာရုံကြောများမရှိလျှင်၊ သူတို့သည် HA တစ်မျိုးစိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်သည်။
အဆိုပါ handjob များအတွက်လက်, ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘောလုံးအပေါ်တလက်
Handjobs များသည်တစ်ခါတစ်ရံပင်ပင်ပန်းပန်းခံစားရနိုင်သည်။ သငျသညျထပ်ခါထပ်ခါအတူတူလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေလုပ်နေဒါကြောင့်သင်ကနည်းနည်းကတက်ရောနှောသင့်ပါတယ်တူသောခံစားရရန်လွယ်ကူသည်။ ဘောလုံးများသည်ဤအဖြေအတွက်ဖြစ်သောကြောင့်ကောင်းပါသည်။
အဆိုပါ handjob စဉ်အတွင်းသူ၏ဘောလုံးပေါ်တွင်သင်၏အခြားလက်ကိုတင်ထားရမည်။ တကယ်တော့အဲဒီမှာအစုတခု technique ကိုမရှိ, ဒါကြောင့်သင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပျော့ပျောင်းသောကစားစရာနှင့်အတူကစားမယ်လို့ဘယ်လိုသူတို့နှင့်အတူကစား။ သူတို့ကိုသင့်လက်၌လှည့်ပတ်။ လက်ချောင်းဖြင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖိအားကိုသုံးပါ။ သူတို့ကအရမ်းအထိခိုက်မခံနိုင်အောင်သင်၏လက်၏အဆက်အသွယ်ကောင်းသည်ဟုခံစားရသည်၊ သင်အများကြီးလုပ်စရာမလိုပါ။
ကောင်းပြီဒါဆိုမင်းပါးစပ်မှာပါဝင်ချင်တယ်။ သင်၏ပါးစပ်ကိုဘောလုံးကစားရန်အသုံးပြုခြင်းသည် blowjob တစ်ခုတွင်အသုံးဝင်သည်။ သင်ခေါင်းကိုပေးခြင်းနှင့်သင်၏လက်များဖြင့်သူ၏ဘောလုံးနှင့်ကစားခြင်း၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်သူ၏ဘောလုံးများပေါ်တွင်သင်၏ပါးစပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတို့အကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မျိုးစုံကသူ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးသင်၏မေးရိုးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ထားသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်မှာလက်ထပ်၏သွန်း
အချို့ယောက်ျားလေးများသည်၎င်းတို့၏ဘောလုံးများကိုလျက်ခြင်းနှင့်နို့စို့ခြင်းသည်ခံစားရသည့်ခံစားမှုထက် ပို၍ ကြည့်ကောင်းသည်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြည့်ခြင်းသည်သင်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာကဲ့သို့ပင်ထိရောက်မှုရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ထိပ်ဆုံးအချက်မှာ၎င်းကိုသွားရန်၊ သင်၌ပျော်မွေ့ရန်နှင့်သင်ကြည့်ကောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဘောလုံးကိုနမ်းခြင်းဖြင့်သင်သည်လှောင်ပြောင်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်အနားပတ်လည်နှင့်အောက်ခြေမှအထက်သို့လှည့်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုသင်ညင်ညင်သာသာစုပ်ယူနိုင်သော်လည်းသင်၏သွားများကိုငြီးငွေ့ပါ။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောမျက်စိထိတွေ့မှုအတွက်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ gooch မမေ့ပါနှင့်
အဆိုပါ gooch ကယ့်ကိုအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောကြောင့်၎င်းသည်သူ၏ arsehole မှလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်သင်ကလျက်လျက်ချင်သောအတိအကျအကြောင်းပြချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်အနည်းငယ်ခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်။ သူကစိတ်အားထက်သန်လျှင်, တစ်ခုခုကိုလမ်းထို့နောက် gooch နှင့်အတူဆော့ကစား!
အကယ်၍ သင်ဤအရာသည်မသေချာပါက၎င်းကို perineum ဟုလည်းခေါ်ပြီး၎င်းတွင်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါပါရှိသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စအိုနှင့်သင့်လိင်အင်္ဂါအကြားအရေပြားtheရိယာနှင့် လူတို့အတွက်အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံသောကြောင့်ဤအာရုံကြောအစွန်အဖျားအောက်ရှိဆီးကျိတ်သည်။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ G-Spot ပါ။ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကစားတာကမင်းရဲ့လူတောင်မသိတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာပါ။
သူ၏လက်များကိုဘောလုံးများပေါ်တွင်အသုံးပြုသည့်အခါ၊ သင်၏လက်ချောင်းကိုအောက်ဘက်သို့ဆန့ ်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း (ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း) ပွတ်သပ်ပါ (တစ်ခါတစ်ရံသင်၏လက်ချောင်းကိုစိုစေခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်) ။ သင်၏ပါးစပ်ကိုသုံးသည့်အခါသင်၏လျှာနှင့်အလားတူနည်းကိုသုံးပါ။ ဤအချိန်တွင်သင်၏မျက်နှာသည်သူ၏မြည်း၌သာဖြစ်သည်။
သူ့အတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံကိုကျယ်ပြန့်စေသည့်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမှာသူ၏ဘောလုံးများကိုလိင်တစ်ခွင်လုံးထိခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏လက်နှင့်အတူတူနည်းစနစ်များကိုသုံးပါ။ အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ cowgirl နှင့်နောက်ပြန် cowgirl တို့ဖြစ်သည်။ သငျသညျအောက်မှာသင်၏လက်ကိုရောက်ရှိနိုင်လျှင်သာသနာပြုများနှင့်ဇွန်းလည်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်လည်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်မတော်တဆလေးလွန်းခြင်းများမပြုလုပ်မိစေရန်သတိထားပါ။
• ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုလက်ချောင်းနဲ့ - မိန်းကလေးတွေ၊
• စိတ်ပျက်စရာဖြောင့်မိန်းကလေးများအားဖြင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး အထဲကစားရန်မည်သို့မည်ပုံ